Posted by kaungngelay on Sep 23, 2014 in Community & Society, Environment, Sciences & Resources | 27 comments
ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေ တိုးတက်အောင်လုပ်နေပါတယ်…. ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တွေတည်ဆောက်ပြီး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး တစ်ခေတ်ဆန်းတာအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်… အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာတော့ အရင်က တစ်ဦးတည်းချုပ်ကိုင်ရောင်းခဲ့တဲ့ ဖုန်းကဒ်တွေလည်း ဈေးသက်သက်သာသာသုံးနိုင်တော့ ပြည်သူတွေ ပျော်ကြတာပေါ့ဗျာ… တွေ့တဲ့အတိုင်း နိုင်ငံခြားသားတွေဆို မြန်မာတွေ ကဒ်တွေ ဝယ်နေတာကြည့်ပြီး ပီတိတွေဖြစ်နေကြတယ်.. အားလုံး ပွဲစားတွေကြီးဘဲ… တန်းမစီနိုင်တဲ့သူတွေကို ဈေးတင်ရောင်းဖို့ပေါ့… (အခုတန်းစီတဲ့သူတွေတောင် အိုင်ဖုန်းဝယ်ဖို့ စင်ကာပူကသူဌေးတစ်ယောက်က စာချုပ်လာချုပ်သွားသေးဆိုဘဲ ) ဒီနေရာမှာ တာဝါတိုင်တွေ လာပါပြီ၊ သူတို့လည်း ပါဝါလိုတာပါဘဲ…
မနေ့က သတင်းတစ်ခုဖတ်ရတာတော့ အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံနေ လျှပ်စစ်ဓာတ်နဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ ပိုပြီးတိုးမြှင့်ဝယ်ဖို့ ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်သွားမည့်အကြောင်း လက်ရှိထိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်တဲ့၊ မကြာမှီလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် တရားဝင်အလည်အပတ်ခရီး လာမယ်ဆိုသတဲ့နော်။
ကိုသူရိန် ပြောတဲ့ ပါဝါ ဒို့တိုင်းပြည်မှာ ရှင်သန်နိုးထနိုင်ပါအုံးမလားလို့ စိုးရိမ်မိပါရဲ့။
တကယ်က မြန်မာဝန်မင်းများ တိုင်းပြည်ကို အခုလို ကြာကြာ အုပ်ချုပ်တဲ့နည်း လာသင်မှာပါ ခင်ဗျာ…
ရောင်းစရာ လျှပ်စစ်ကတော့ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်အသုံးချပြိး အပူထွက်လာရင် ဒိုင်နမို လည်ကာ လျှပ်စစ်ရယူတဲ့နည်းနဲ့ တည်ဆောက်မယ့် တာဘိုင်ထွင်နေပါတယ်… လက်တလော အကြောင်းပြစရာမရှိပါခင်ဗျာ…
သြော် ကိုသူရိန် ရယ် ကွယ်
လျှပ်စစ် ပါဝါက လိုပါတယ်။
ဓာတ်တိုင်တွေ ဓာတ်ကြိုးတွေ အရင် လုံခြုံ အောင် လုပ်ပေးရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
သူရိန်မူး၍ရေးသည်ဆိုတာ တခြားမဟုတ်ဘူးမမကြီး နည်းနည်း ဥပဒေဘောင်ထဲလက်တစ်လုံးခြား လုပ်ချင်တော့ ‘ကျွန်တော်မူးနေလို့ပါ’ ဖြေရင် တချို့က ခွင့်လွှတ်မလားလို့ပါ….
စနစ် တစ်ခုထည်းကြောင့် မဟုတ် . . စနစ်တစ်ခုထည်းကြောင့် မဟုတ် . .။
စနစ်မှာ အပြစ်မရှိပါ… ဒီစနစ်ကို ပုံဖော်တဲ့လူတွေမှာသာ အဓိကပါ… ကွန်မြူနစ်လည်း ကောင်းတာဘဲ… ဆိုရှယ်လစ်လဲ ကောင်းတာဘဲ… လုပ်တဲ့သူတွေက သူလုပ်ချင်တာ လုပ်လို့သာ စနစ်တွေ ပျက်ကုန်တာပါ… ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်ကတော့ ဒီမိုကရေစီပေါ့… ဒို့ မြန်မာ့ပညာရှင်များကတော့ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီတဲ့ ဗျုို့ သတိသာထားပေတော့… နည်းနည်း ပြင်လိုက်ပြီ….
အဲ့ ပါဝါ အပြည့်အဝ မရခင် ရှိတဲ့ ပါဝါ လေးပဲ သူများဆီ ပါ မသွားအောင် ဆုတောင်းပါဦး
ပါဝါ လိုလို့ ပါဝါ ထုတ်ဖို့ နေရာလေးတွေရော ကျန်သေးလား ပြန်ကြည့်ဦးဗျ
တော်ကြာ လက်သိပ်ထိုး ရောင်းထားခဲ့တဲ့ မြေတွေထဲ ပါကုန်ရင်ဖြင့် အခက်
အကို အခုက ခေတ်ပြောင်းသွားပြီ….
အသိမ်းခံရမယ့်မြေဆို ပိုတောင် လိုက်ဝယ်နေသေး… ဟေးဟေး… နို့ဆို အခု စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ မြေမသိမ်းတော့ဘူး မြေကို ဝယ်ထားတဲ့ဈေးထက် ၂ ဆပေးပြီး ပြန်ဝယ်ရတယ်လို့ ကြားတာဘဲ.. ဒါနဲ့ ဂျပန်တွေလည်း ပြန်ပြေးရော…
ဟီးး သူကြီးထက်​အရင်​ Mလုလင်​ဦးသွားပြီ။ ဟုတ်​တယ်​စနစ်​တစ်​ခုတည်း​ကြောင့်​​တော့မဟုတ်​။
ခက်တာ က မြန်မာပြည်သူ ပြည်သူများအက အပြောင်းအလဲ လက်မခံ
အခု ပို ဆိုး သည်
ထစ် က နဲရှိ ဆန္ဒပြ ဆိုတော့
စနစ်​ကိုပြင်​ချင်​ရင်​ လူကို အရင်​​ပြောင်းမှ ရမှာပါ ။ လူ​ပြောင်း မူ​ပြောင်း စနစ်​​ဟောင်းကိုလဲ လွှင့်​ပစ်​နိုင်​မဲ့ တစ်​​နေ့ ​ရောက်​လာဦးမှာပါ ။
Aww… Power… Power…!!
နောက် ၁၅ နှစ်မှသာလျှင် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးရမည်ဟု လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၃၀ ၌ အိမ်ထောင်စုအားလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီ ရန် နှစ်ဆတိုး ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
လက်ရှိလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုအား မြှင့်တင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆွဲဆောင်ခြင်းအပါအ၀င် ထိရောက် သည့် နည်းလမ်းများအသုံးပြုသွားမည်ဟု လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး က ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိသည့် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် နှစ်စဉ် ၂၀၀,၀၀၀ ခန့် တိုးနေသော်လည်း ထိုနှုန်းအ တိုင်းဆိုပါက တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးရရန် ၃၆ နှစ် ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် ရည်မှန်းချက်အား ပြည့်မီရန်မဖြစ်နိုင်ဟု ဦးခင်မောင်စိုး က ဆိုသည်။
ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန် မြန်မာနိုင်ငံသည် လူဦးရေ၏ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော အိမ်ထောင်စု ၇.၂ သန်း အား ၁၆ နှစ်အတွင်း လျှပ်စစ်မီးရရှိ စေရန် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ စာရင်းဇယားများ အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမှာ ၃၃ ရာ ခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာပြီး ၂၀၁၁ က အိမ်ထောင်စု ၂.၄ သန်း လျှပ်စစ်မီး ရရှိရာမှာ ၂၀၁၄ တွင် ၃ သန်းထိရှိ လာခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ခြင်းများတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားရန် စီစဉ် နေပြီး လာမည့် ၅ နှစ်အတွင်း လျှပ် စစ်ဓာတ်အားရရှိမှု ပိုမိုလာမည် ဟု မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၃၀ ရည် မှန်းချက်အား ပြည့်မီရန် ၂၀၂၀ တွင် လူဦးရေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်မီးရရန် လိုအပ်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကလ်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူး ရေး ကွန်ရက် အဆင့်မြှင့် ရန် ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ထုတ်ချေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။ ၀န်ကြီးဌာန ၏ နောက်ဆုံး စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက် ထားသည့် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းမှာ ၄၃၆၁ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
ဒါလေးဖတ်ရတော့ အမဇီ ဟိုဟာလေး ပြေးမြင်တယ်ဗျာ….
အရက်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ စုံတော့ အရက်သမား တစ်ယောက်က ဟေ့ သူရိန် မနေ့က အဆောက်အဦးကြီး ဖွင့်ပွဲလုပ်တော့ ဝန်မင်းတစ်ပါးလာပြီး ဖဲကြိုးဖြတ်ပေးပါတယ်… ဆောက်လုပ်ရေး ကံထရိုက်ရယ်… ဆောက်လုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာမှုးကြီးရယ်လည်း လက်ကလေး ကိုယ်စီနောက်ပစ်လို့ အရိုအသေပေးပြီး လိုက်ဖား… အဲ့ ရောင်လို့… လိုက်ပါခြံရံလျှက်ပေါ့… ဝန်ကြီးက ဘာမှမသိတော့ ဘေးက ကံထရိုက်တာကြီးကို မေးတာပေါ့.. မင်းတို့ ဆောက်တဲ့ အဆောက်အဦးကြီးက ဘယ်လောက်ခံမတုန်းတဲ့… ကြည့်စမ်းမေးတတ်တယ်… ဒဲ့ဘဲ.. ဒါမှ တို့ဝန်ကြီး… အဲ့တော့ ကံထရိုက်တာကြီးက နှစ် ၆၀ ဆယ်တော့ အသာလေးပါ ဘုရားပေါ့… ဆိုပြီး ဒက်ကနဲ ပြန်ဖြေတာဗျို့.. ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ ဘေးက အင်ဂျင်နီယာမှုးကြီးဆိုတာ ငါတောင် ဒီလောက်မသိ… သူက ဒိုင်းကနဲ ဖြေချလိုက်တယ်ပေါ့… ဒါနဲ့ ပွဲပြီးတဲ့အထိ မစားနိုင်၊ မငမ်းနိုင်(ဘေးက ဖဲကြိုးဖြတ်ဖို့ ကူညီတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို ပြောပါတယ်)… ဖြစ်နေတာ ဖြစ်နေတာဗျ… အရက်က ကောင်းလိုက်တာ… သူကလည်း အစာမကြေနိုင်ဆိုတော့ ပွဲလည်း ပြီးရော ကံထရိုက်တာကြီးကို မေးတာပေါ့.. ဆရာ ကျွန်တော်တောင် အဲ့လောက်ခံမယ်မထင်ဘူး… ဆရာက ဘယ့်နှယ့် နှစ် ၆၀ တော့ အသာလေး ဆိုပြီး ပြန်ဖြေရတာတုန်း… ကျွန်တော်ကို တောင် မမေးဘူး ဘာညာပေါ့ဗျာ… အေ့….
အဲ့တော့ ကံထရိုက်တာကြီးက ဘာပြန်ပြောတယ်ထင်လဲ… ဒီမှာ ကိုယ့်ဆရာ အဲ့အနှစ် ၆၀ ကျ အဲ့ ဝန်ကြီးကော၊ ကျုပ်တို့ကော သေလောက်ပြီဗျ အခုတောင် ကျုပ်သက် ၅၀ ရှိပြီ ခင်ဗျားမှတ်… ဆိုပြီး စီပွားရေးသမားများ လူလည်ကျတတ်ပုံလေးကို အရွှန်းဖောက်တယ်ဗျို့ …
User:Americanus/Energy War – Wikipedia, the free …
World War IV is the global war for energy. Over the past 100 years, the dominant source of energy has been oil. Oil is found primarily in the Middle East, so much
ရွာဘေးမှာ minihydro လာလုပ်ဖို့ စဉ်းစားသေး…. ဒါပေမယ့် မြစ်က ဝိုက်ပြီး မစီးတာတို့… ရေတံခွန် အသေးလေးတွေ ရှိမှတို့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ရှိနေသေးတယ်… ဒီကြားထဲ အာဏာပိုင်တွေက တစ်မှောက် သူများ လာလုပ်ပေးတာတောင် သူတို့ ခွင့်ပြုချက်ရမှတို့ ဘာတို့နဲ့… သူတို့ကျ ဘာမှ မလုပ်နိုင်… လုပ်နိုင် လှူနိုင်တော့လည်း အားမပေး… အခုတော့ ပြောင်းလဲလာပါဘီ.. နည်းနည်း….
အနူမြူကြောက်နေတာတော့ ကျွန်တော်လည်း ပါတယ်… ဒါပေမယ့် သံယံဇာတတွေ ကုန်မှာထက်စာရင်တော့ နောက်ဆုံးလည်း ဒါဘဲ ဒီဘူတာဘဲ ဆိုက်မယ်ထင်တာဘဲလေ… ဒီအလှတရားလေးတွေ မပျောက်ခင် ကြိုလုပ်ပစ်လိုက်တာမှ ကောင်းသေးလို့ တွေးမိလို့ပါဗျာ… ဒီလောက်လည်း ဥာဏ်မမှီ၊ ဦးမဆောင်တတ်ပါဘူး…
Nuscale ကတော့ ကျွန်တော့် အကြိုက်ပါ Gen-IV အထိတော့ ဆောရီးပါ… ကြောက်လွန်းလို့… အခုဟာလေးက တရုတ်တောင် အမြောက်အများ ဆောက်မယ်ကြားတယ်.. ဒါနဲ့တောင် ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ရေကာတာတွေ လာလုပ်ပြီး နေရာလာလုနေတယ်မှတ်တယ်… မဟုတ်မှ လွှဲရော Backup ဘဲ နေမှာပါ… ဂျပန်လည်း ရှိတာဘဲလေ… ဝေ့ဝှိုက်နေလည်း နောက်ဆုံးတော့ သွားရာလမ်းကြောင်းက ဒါနဲ့ အဆုံးသတ်မဲ့ အတူတူ ခုကတည်းက ကြိုတင် လုပ်ထားရင် သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေအတွက်များ ကောင်းမလားလို့ပါ…
တရုတ်နဲ့ စာချုပ်ထားတဲ့ WestingHouse တော့ မကြိုက် Package မဖြစ်ဘူးလေ… ကျွန်တော့် အကြိုက်တော့ Nuscale ဘဲ ဒါပေမယ့် Technology Exchange အတွက် အနောက်အုပ်စုနဲ့ အဆင်ပြေမှ NEA တို့ ဘာတို့လို အဖွဲ့တွေနဲ့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်… ဒီအတိုင်းတော့ Devil Country တွေထဲက ခုမှ ထွက်စ တစ္စေပေါက်စလေးကို ဟိုကလည်း ဆောရီးပါ ကိုကို….
မူးပြီးရေးတဲ့ သူရိန်ဆိုတာ kaungngelay ပဲလား..ခည
…လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှုကို အခြေတည်ပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တိုင်းတာနိုင်တယ်တဲ့……
..သများတို့ မြန်တျန့်ပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် (အခုတောင် မီးပျက်လို့ ..အင်တာနက်ဆိုင်ရောက်နေတာဆိုတော့လေ)… မြ်ို့ကြီးတွေတောင် …နပ်မမှန်တာ တောကြိုအုံကြားပါထည့်တွက်လိုက်ရင် အောက်ဆုံးအဆင့်များရောက်နေမလားဘဲနော်
..စကားမစပ် ရာသီဥတုပူလာလေ မီးပိုပျက်လာလေ ဆိုတဲ့ သဘောတရား၂ခု ဘလိုများ …ဆက်စပ်နေပါလိမ့် သိချင်သား
ရာသီဥတုပူတော့ မီးပျက်ပေးရပါတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မီးလာနေရင် လူတွေက ပန်ကာတွေ လေအေးပေးစက်တွေကို ဖွင့်ကြပါတယ်… ဒီအချိန်မျိုးမှာ ပိုဖွင့်ကြပါတယ်… ဒီတော့က သဘာဝကပေးတဲ့ လေကို အသုံးမချတတ်တော့ပါဘူး… ဒါအပြင် ပြည်တွင်းစီပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်ပါတယ်… ဒီတော့ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာလို ရက်တောင် ဆိုတဲ့ အရာကို မတွေ့ဘူးပေမယ့် ဒီမှာတော့ ပြည်တွင်းဖြစ် ရက်တောင် တွေ အရောင်းသွက်စေချင်တာလည်း တစ်ကြောင်း၊ မီးစက်သမားများနှင့် ဓါတ်ဆီ၊ဒီဇယ်ဆိုင်များ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်တာကလည်း နောက်တစ်ကြောင်းပေါ့နော်… အလကားစတာပါ… လောပိတ ရေခန်းလို့ပါလို့… ဒါလေးဘဲ အကောင်းရှိတယ်… ကျန်တာတွေက ပုံလာလာပြောတိုင်းယုံ….
ပါဝါ ၅၄ တဲ့။
တွေ့ရတာနော်။ အများကြီး ဝမ်းသာတယ်
စာများများ ရေးတင်ပါ ဂန်ဂလေး။
မူးလို့ဆိုပြီး သူများ က ပြသနာ လုပ်လို့ မရသလို
ကိုယ်ကလဲ သူများ ကို တရားစွဲ လို့ မရဘူး ကွဲ့။
တစ်နေ့ကမှ သတင်းထဲ မိန်းမတစ်ယောက် က လူတစ်ယောက် က သူ့ကို မုဒိမ်း ကျင့်ပါတယ်လို့ တရားစွဲတယ်။
တရားရုံးက စစ်တော့ သူ မူး နေလို့ ဘာမှ မသိတုန်း ကျင့်သွားတာ ပြောတော့ ရီ စရာဖြစ်ကုန် ရော။
ကျွန်တော်က မူးချင်ယောင်ဆောင်တာပါဗျာ… ရှုးတိုးတိုး…
ဖြစ်နိုင်တယ်အကို ကျွန်တောတုန်းကလည်း ကြောက်လို့ ညိမ်နေရတယ်ဗျ…
အခုထိ ဘယ်သူမှ မပြောရဲဘူး…
သူကပြောသေးတယ်… မောင်လေးကို မမက တာဝန်ယူမျာပါတဲ့…
ကျွန်တော်လည်း ရှက်တာနဲ့ ခေါင်းညှိတ်ပြီး လက်ခံထားလိုက်တာ…
အခု ခလေး သုံးယောက်ရတဲ့အထိဘဲ အကို…. ရှက်လိုက်တာဗျာ
လူကြီးကို မူး၍ နောက်သွားသည်…
မူးချောင်ဆောင်တာ အပြစ်မလွတ်ဘူးဟေ့ ဟေ့!!
ရူးချောင်ဆောင်တာမှ အပြစ်လွတ်တာ ဟေ့ ဟေ့!!!
အဲဒါ အကိုလည်း မဟုတ် အမလည်း မဟုတ်ဘူးးး
အရီးခင် လို့ ခေါ်တယ်။
ရူးတာနဲ့ မူးတာက ခံစားချက် ပြင်းပြတာခြင်း တူပုံဘဲဗျာ….
အချစ်အတွက် – အရူးအမူးဆိုတဲ့ စကားကို အရူးအမူးချစ်တယ် ဆိုတာမျိုး သုံးတာမျိုး ရူးရူးမူးမူးစွဲလမ်းတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ရေးကြတယ်လေဗျာ…
မနိုင်နိုင်ရာ လျှောက်ပြောတာ… စိတ်ဆိုးရဘူး
သူရိန် ရူး၍ရေးသည်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ ဖတ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး
​မေတ္တာ ပါဝါစွမ်းအား ကျဆင်း​နေသ​ရွေ့​တော့